Chii chinonzi Google Pay? | ECommerce nhau
Zvirokwazvo, Google Pay ipuratifomu inozivikanwa nevashandisi vese, asi vashoma kwazvo vanoziva kushanda kwayo kwechokwadi uye kunyanya chikamu chemagetsi chemagetsi. Mupfungwa iyi, Google Pay, yaimbozivikanwa sePay neGoogle uye Android Pay, ipuratifomu yehunyanzvi yakagadzirwa neGoogle kuti ishandiswe mu kubhadhara masisitimu kubva kunhare mbozha, ichipa vashandisi kugona kuitisa mafambiro emari aya kubva kune chero chinhu chehunyanzvi, senge android, mapiritsi kana smartwatches.
Iyi chikuva inozivikanwa pamusoro pezvose nekuti inobatanidza nzira dzese dzekubhadhara dzaungashandisa neGoogle. Makanika ayo akavakirwa pachokwadi chekuti iwe unongofanirwa kuwedzera kadhi rako ruzivo kamwe uye, kubva panguva iyoyo, unogona kushandisa kunyorera kune anotevera mashandiro:
Tenga muzvitoro nefoni yako.
Tenga zvinhu pamaapplication nemawebhusaiti.
Zadza mafomu otomatiki muChannel.
Tenga zvigadzirwa zveGoogle.
Tumira mari kushamwari uye mhuri, kunyange hazvo chinhu ichi chinongowanikwa muUS neUK.
Chero zvazvingaitika, kuve nebasa iri zvakakosha download ichi chikumbiro teknolojia kubva kunzvimbo yakatendeseka uye yakachengeteka. Kubva panguva ino zvichienda mberi, vhura kune ese mabhenefiti anopiwa kubva kuGoogle Pay. Uye izvo zvinogona kureva shanduko mutsika mukutenga kwaunoita kubva kuchitoro chepamhepo. Kusvika padanho rekuziva kuti chishandiso ichi chine chii uye mashandiro eGoogle aya anoshanda, izvo zvinobvumidza kubhadhara pakati pevanhu nemabhizimusi epamhepo.
1 Google Pay: inoshanda sei?
2 Pane yako Android nhare kana piritsi ine Google Pay app
3 Mashandisiro ekushandisa Google Kubhadhara?
4 Chii chinobatanidzwa neGoogle Pay kunyorera?
5 Chii chinonzi Google Pay chaicho?
Google Pay: inoshanda sei?
Rimwe remabasa ako ekutanga richava rekutarisa mashandisiro aungaite iyi yekubhadhara maitiro muzviitiko zvako zvezuva nezuva. Kubva pane iyi nzira yakasarudzika, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyi chikuva chekubhadhara chinoonekwa nemipiro inotevera iyo yainogona kupa kune bhizinesi kana chitoro chedigital.
Ndicho nhare yekubhadhara nhare. Kubva uko vashandisi kana vatengi vanogona kuomesa kutenga kwavo kana kuita kwedhijitari.
Inobvumira wedzera rumwe rudzi rwemakadhi, sekuvimbika, nzira dzekutakura kune zvakawanda zvakanakira sevhisi.
Makanika ayo akanyatsoenderana ne isina kutaurirana tekinoroji kuburikidza neNFC chip yezvigadzirwa zvehunyanzvi. Ndokunge, nekuchengetedzeka kukuru kuita chero rudzi rwekuvhiya neiyi chaiyo nzira yekubhadhara.
Kana iwe uri Google Pay mushandisi, iwe une chaiyo account account, uye ichi kubvumidzwa irudzi rwemhando yekuzivisa iyo yemushandisi chaiyo bank account nhamba.
Paunenge uchigadzira mari yekutenga pamhepo, chimwe chezvakanakira iwe chauchazove nacho kubva ikozvino ndechekuti iwe unozogona kuchengeta zvakavanzika ruzivo rwakachengeteka nguva dzose uye mune chero mamiriro.
Pane yako Android nhare kana piritsi ine Google Pay app
Kana iwe uine nharembozha yeApple neNFC, uye iwe uchida kutanga kushandisa Google Pay seyunhare yekubhadhara sevhisi muzvitoro chaizvo kana online, pamusoro pekuchengetedza makadhi ako ekuvimbika nemamwe magwaro anoenderana neapp, iwe unongofanira kutevera mashoma matanho akareruka:
Dhawunirodha application yeGoogle Pay, yemahara, kuburikidza neGoogle Play Store. Nenzira yakachengeteka uye pasina kupindwa nemavhairasi kana mamwe marudzi emarware.
Pane peji rekutanga reapp, tinya pane "Kubhadhara" tebhu iri mune yepazasi barbar.
Dzvanya pabhatani rebhuruu "Yekubhadhara nzira".
Nongedzera kamera kamera pane kiredhiti kana kiredhiti kadhi kuti uise iyo data, kana kuiwedzera manyore.
Iwe zvino uchave wakagadzirira zvakakwana kushanda neiyi tekinoroji chikuva chakabatana nekubhadhara muzvitoro zvemagetsi. Ivo vanogamuchirwa muchikamu chakanaka chemasizinda emakambani aya uye chakanakisa pane zvese ndechekuti haufanire kubhadhara imwe euro. Kwete kana kuita mari mukutungamira kwayo kana kugadzirisa. Zvinogona kuti pakupera kwezuva iko kuita kunobatsira kwazvo kune zvaunofarira semutengi wezvitoro kana ezvitoro zvepamhepo.
Mashandisiro ekushandisa Google Kubhadhara?
Kugamuchirwa kweGoogle Pay nemabhangi ndechimwe chezvinhu zvine mutsindo mukugadziriswa kwesystem panguva ino. Kwete nenzira yechisimba, asi zvishoma nezvishoma uye kunyangwe kuzviita nenzira yakajairika pakati pevashandisi veSpanish. Nhasi kune huwandu hwakanaka hwezvikwereti zvikwereti zvakafunga kubvuma kushandiswa kweGoogle Pay nemakadhi avo nemasevhisi.
Sezvatatotaura, Google Pay inoshanda neNFC tekinoroji. Kana iwe usina, haugone kushandisa sisitimu iyi kubhadhara uye kubhadharisa paakaundi kuburikidza nenhare mbozha muzvitoro nenzvimbo dzepamhepo. Kana iwe uine Android 4.4 kana yepamusoro sisitimu yekushandisa, haufanire kunetseka nezve izvi.
Iyo NFC iri nyore kuwana, asi bhangi rinoenderana idambudziko rakaoma kugadzirisa. Nhasi, mabhanga mazhinji eSpain haatsigire tekinoroji iyi. Asi zvakadaro, zvimwe zvikwereti zvikwereti zvinogamuchira izvi kubhadhara neGoogle Pay uye zvinokutendera kuti uite irwo rudzi rwekuita kana zviitiko.
Nhanho inotevera ichave yekuwedzera nzira yekubhadhara, chero zvayaive. Mupfungwa iyi, zano rako rinozoenderana nekudiwa kwekuwedzera kiredhiti kadhi kana kubatanidza Google Pay neako PayPal account. Chero ipi yeaya maitiro anogona kugutsa ichi chikumbiro kubva zvino zvichienda mberi. Kunyange zvakadaro, hazvisi zvishoma zvechokwadi kuti iwe unogona kuzviita nekuwedzera pikicha kukadhi rako uye kuongorora data pairi pasina kuita kuti uvazivise zvine hungwaru.
Chii chinobatanidzwa neGoogle Pay kunyorera?
Google Pay inoratidza yako ese ekubhadhara sarudzo muapp (makadhi awakagadzirisa, yako PayPal account ...). Kunyangwe kubva ikozvino uchifanira kufunga kuti haazi ese masangano echikwereti achiri kushanda neichi chakakosha kunyorera.
Chero zvazvingaitika, panguva ino Google Pay inoratidzawo vatengesi vanopa rudzi urwu rwekubhadhara. Asi pamusoro pezvose, inokupa iwe akateedzana mabhenefiti atinokufumura iwe pazasi:
Iwe unogona kunyoresa ako ese makadhi ekuvimbika uye makadhi echipo.
Google Pay inokuratidza nhoroondo yekutenga kwako kwekupedzisira.
Paunenge uchibhadhara, Google Pay haigovane iyo chaiyo kadhi ruzivo panguva yekubhadhara.
Nenzira iyi, iwe unenge uine mamwe masevhisi kupfuura kusvika zvino uye ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvekuti ubhadhare iyi application yezvigadzirwa zvetekinoroji (piritsi, nharembozha kana zvimwe zvigadzirwa zvine maitiro akafanana. zvachose vakasununguka uye iwo chero rudzi rwemakomisheni kana zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kana kugadzirisa. Kugona kumisa sevhisi chero nguva uye zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi pachavo.
Chero zvazvingaitika, chimbo chinoshanda chinowanikwa kune vese vashandisi muhukama hwavo neinternet chikamu chekutenga nekuda kwekukosha kusingaperi kwainogona kupa chero nguva. Uye kubva pakuona kweavo vane basa rebhizinesi kana chitoro chepamhepo, zvakare chishandiso chakakodzera kusimudzira kutengesa kwezvigadzirwa zvavo, masevhisi kana zvinyorwa.
Kusvika pakuti ivo vanogona sanganisira iyo pamwe nezvimwe: makadhi echikwereti kana echikwereti, kuendeswa kubhangi, kubhadhara kwemagetsi, nezvimwe. Zvekuti nenzira iyi, vese vatengi vayo vane dzimwe nzira dzakawanda dzekutarisana nemari inobhadharwa kubva mukutora kwavo kuburikidza neInternet. Paunenge uchitenga nhare, bhuku, audiovisual zvinhu, zvemitambo kana chero zvekupedzisira mineti.
Chii chinonzi Google Pay chaicho?
Iyi yakasarudzika yekubhadhara system yatiri kutaura nezvayo inogadzira akateedzana mabhenefiti ayo ari nyore kufunga nezvayo kuti uzive kana iri nyore kurodha pasi application. Semuenzaniso, mune anotevera zviito zvatinoisa pachena pazasi:
Iyo inotivhurira isu kune matsva mafomu ekubhadhara ayo anogona kugadzirisa dambudziko iri pane imwe nguva muhupenyu hwedu. Sezvo mukushaikwa kweimwe yetsika kana yakajairwa nzira yekubhadhara.
Iyo yekuchaja system iyo inozivikanwa kunyanya neayo kuchengeteka kwakakwirira uye kupi pasina nguva yatinofanira kutya maitiro eichi chiitiko. Kunyangwe uine zvivimbiso zvakakura kupfuura paunenge uchibhadhara kuburikidza nemakadhi echikwereti kana echikwereti.
Kubhadhara kunogona kuitirwa kutenga pamhepo zve nzira isina muganho sezvo pasina zvirambidzo zvemhando ipi maererano nechinhu ichi. Kunyangwe iine mukana chaiwo wekuzvibatanidza neakajairika maitiro ekubhadhara kusvika zvino.
Kubhadhara kwako haidi kunyoreswa uye iwe haubhadhare mari yekuchengetedza sezvo ichibva pane yayo yakapusa mashandiro sisitimu. Uchaona kuti zvishoma nezvishoma zvinogutsa zvaunoda mune tsika dzekutenga muzvitoro. Hazvishamise kuti mhedzisiro yako ichave inoshamisika.
Uye pakupedzisira, ndeimwe yeiyo maitiro ekupedzisira izvo zviri kuvandudzwa muhukama hwekutengesa, kunyanya mumafomati epamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chinonzi Google Pay?